musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » chengetedzo » Lufthansa Boka rinomisa ndege dzese kuenda kuChina
Kuchengetedzwa kwevatakuri nevashandi chinhu chakanyanya kukoshesa Boka reLufthansa. Mushure mekunyatsoongorora ruzivo rwese rwuripo pane iyo coronavirus, Lufthansa Group rakafunga kumbomisa ndege dzayo dzeLufthansa, SWISS neAustria Airlines kuenda / kubva mainland China kusvika 9 Kukadzi nekukasira kushanda. Uye zvakare, kugamuchirwa kwekubhukisirwa kwendege kuenda / kubva (mainland) China yakamiswa kusvika kupera kwaKukadzi. Ndege mashandiro kuenda / kubva kuHong Kong ichaenderera sezvakarongwa. Iyo Lufthansa Boka ichaenderera ichiona mamiriro ehutachiona hwekona uye iri kusangana nevakuru vane basa.
Lufthansa, SWISS neAustria Airlines dzichaenda kunzvimbo dzadzo munzvimbo yepakati peChina imwezve nguva. Izvi zvinoitirwa kupa vashanyi vedu mukana wekutora ndege yavo yakarongwa nevashandi vedu kuti vadzokere kuGerman, Switzerland neAustria.
Vatakuri vane chekuita vakabata tikiti rakapihwa pamberi / musi wa 23 Ndira kwendege kuenda / kubva mainland China pakati pa24 Ndira na29 Kukadzi, vane mukana wekudzokororazve kamwe mahara kwendege munzira yekutanga kana kukanzura rwendo. Izvi zvinoshanda kune vatakuri vane tikiti rakapihwa neLufthansa, SWISS kana Austrian Airlines uye nendege dzine LH, LX, kana OS nhamba yekufambisa. Rwendo rutsva runofanira kuitika panguva dzekupedzisira na30 Gunyana 2020.
Lufthansa Boka rinopa huwandu hwe54 yekubatana kwevhiki nevhiki kubva kuGerman, Switzerland neAustria kuenda kuChinese mainland. Nzvimbo dziri Nangjing, Beijing, Shanghai, Shenyang uye Qingdao. Zvakare, ndege dzeLufthansa Group dzinopa 19 kubatana kwevhiki nevhiki kuHong Kong.
Breaking News China ndege coronavirus chirwere kukanzurwa kwendege Lufthansa Boka